Hadalka wanaagsan waa sadaqo - WardheerNews
Hadalka wanaagsan waa sadaqo
Hadalka wanaagsan ee macaan qalbiga iyo naftaba waa u roonyahay, farxad iyo rayrayn ayuuna ku beeraa, isjacaylka iyo isku kalsoonida ayuu xoojiyaa, wuxuuna meesha ka saaraa cuqdada, nacaybka, kala shakiga iwm. Wuxuu sare u qaadaa niyadda (mooraalka) iyo hanka qofka iyo bulshadaba.
Wuxuu qeyb weyn ka yahay xoojinta xiriirka bulshada iyo dhismaha ummadnimada. Wuxuu saldhig u yahay awoodda iyo horumarka ummadda; sidaa darteed ayaa Alle iyo rasuul (Calayhi Salaatul Wa Salaam) inoo amreen in aynu ku wada hadalno hadalba hadalka uu ka wanaagsan yahay; waayo hadalka xun shaydaanka ayaa uga faa’iidaysanaya inuu dadka ku kala dilo.
Si gaara hadalka macaan ee qalbiga ku beeraya wanaagga waxaa u baahan waalidka iyo ilmihiisa, sayga iyo xaaskiisa, walaalka iyo walaalkiis, macallinka iyo ardaygiisa, masuulka iyo shaqaalihiisa. Si guud in wanaag loogu wada hadlo, looguna wada dhaqmo ayaa la doonayaa; si loo noqdo bulsho iyo ummad dhinac walba ka wanaagsan.
Hadalka wanaagsan waxaa ka mid ah: Salaamta Islaamka, bishaaraynta, dhiirrigalinta, naseexada, sama farida, xuma reebida, cilmi barista, tacsida iwm. Waxaa kale oo barbar socda dhaqan wanaagsan, sida: wax siinta, dhoolacadaynta, wajiga furfuran, gacanqadka (salaanta gacanta), hadiyada, booqashada kan jirran, raacista janaasada kan dhinta iwm.
Haddaynu soomaali nahay dhaqankeena miyiga ka soojeeda ayaa watey ad-adayg iyo hadal kakan oo sidii warankii la isku halgaadayo oo aan inta badan lahayn dabacsanaan, turis, tixgalin, xeerin, qadarin, ixtiraam, soojiidasho iwm.
Inta badana loogama jeedin xumayn ee hadalka dabacsan baa marar badan loo haystay jileec iyo miskiinimo ama hadalka adag baa raganimo iyo fariidnimo u muuqanayey.
Waxaa la wariyey in nin xaaskiisa hadalo dabacsan kula hadlay oo ay ku tiri: waar sida ragga u hadal, iyadoo isleh armaa ninku mid jilicsan oo aan rag wax la qaybsan karin kaa noqdaa!